ISuertia Casino Spain | Buyekeza, Slots, Amabhondi nokulinganisa, Uhlelo lokusebenza | lemidlalo.top | Imidlalo Yezemidlalo
Kuthunyelwe ngu admin in february 23, 2020 february 23, 2020
Lucky Casino: Ukuhlaziywa, Ukubuyekezwa, Amabhonasi nekhuphoni Ngekhodi
Uma ufuna indlela ehlukile yokukuphazamisa wena nenye yamakhasino wakho owathandayo wokuzijabulisa, njengekhasino inhlanhla elungele wena.
Le yekhasino eku-inthanethi ineziqalo zayo ngaphakathi 2012, kungumndeni wamaCatalan othathe isinqumo sokuvula amakhasino futhi akuzange kube sekuvumeleni kukahulumeni ukuthi lokhu kwaba yingxenye yezimboni ezenziwa online.
ISuertia ingelinye lamakhasino adume kakhulu eSpain, ine ngaphezu kwe 70 imidlalo yebhodi epulatifomu yakho ebonakalayo, ukubonwa kwesiza kungenye yezimfanelo ezikhululekile futhi ezihle kakhulu nazo ezidinga ukuba negama lazo lomsebenzisi futhi zibe nombono wazo.
Ukunikeza abasebenzisi ibhonasi eyamukelekile ngokuya ngomdlalo abafuna ukungena ngawo ibhonasi 300 € 100%, ongakujabulela bukhoma roulette nje 60% wediphozithi, bryleta flash kanye blackack Slots nje 34% futhi kuphela i 6%.
Ngasohlangothini lwekhasino, ukunika abadlali inhlanhla kungenye imfucuza yemali. 7%. isoftware yebhizinisi ethuthukiswe yi-Meicrogaming. Ukugxila ekwakheni izindawo ezibandakanyekayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi abasebenzisi bayathandeka. Ilayisense yakho enikezwe i-DGOJ isebenza ngokusemthethweni kulo lonke elaseSpain.
Yazi amakhasino weSuertia!
iwebhusayithi ye-suertia.es ivela ku-quinielista esandleni u-Eduardo Losilla. Ngemuva kweminyaka yokusebenza emachibini futhi sibonga ukulawulwa kokugembula kwe-inthanethi eSpain, okwakhiwa ngaphakathi 2012 Isiteji senhlanhla, kanye newebhusayithi ye-quinielista. Ukubhejela ePortal nakwezemidlalo kukhule kakhulu kusukela ngaleso sikhathi futhi bafake imikhiqizo ehlukene ukufeza izidingo zabasebenzisi babo.
Le khasino, okubandakanya i-grey back Suertia Interactiva SA, ungomunye wabokuqala ukuthola ilayisense yokudlala ekhishwe yi-DgoJ. Namuhla i-Suertia yekhasino inikeza ukuhlanganiswa okujabulisayo kwemidlalo, kufaka phakathi imishini yokudlala, imidlalo yebhingo, roulette, i-blackjack ne-roulette, ngisho izimpilo ezimbalwa. I-Microgaming, I-Quickfire ne-MGA kuhlinzeka kakhulu ngenhlanhla yomdlalo.
Kungani Khetha Inhlanhla?
Iminyaka yokuhlangenwe nakho kokuhlonishwa kwensiza ngalesi sizathu yathathwa njengenye yamakhasino amahle kakhulu kulo lonke elaseSpain, Kwaba yindawokazi ephephile nethembekile ye-inthanethi evumela abasebenzisi ukuthi bazijabulise futhi badlale ngaphandle kwenkinga..
ISuertia ingenye yezinketho ezinhle kakhulu, ngoba kuyingosi yewebhu ehlukile futhi ehlukile phakathi kwabaningi, Kubonakala ngokugxila ekunakekelweni yikhasimende lakho ukuqinisekisa umuzwa ohlukile konke lokhu ukuze uqhubeke ubuyela ekhasino lakho.
Inhlanhla 7 izinketho zokufaka nemali ezintathu ongazisusa, Iphinde ibe nesicelo esivumela abasebenzisi ukuthi badlale kusuka noma kuphi emhlabeni., noma bakuphi. Le yekhasino eku-inthanethi inemidlalo ehlukahlukene nokubheja kwezemidlalo.
Ngakolunye uhlangothi i-suertia inikeza futhi ibhonasi eyamukelekile evela 50% kwe 300 €, kodwa abanakho ukukhuphula nokunikelwayo, ezinye zezimpawu eziphambili eziyinhlanhla:
UBet uphile noSuertia
Inhlanhla ivumela amakhasimende ukubheja ngokugcwele ekusakazweni futhi alandelele imiphumela yokubheja ngokusebenzisa i-livecore, okuvumela iklayenti ukuthi laziswe ngekhodi lomcimbi kanye nemiphumela yokugcina.
Inhlanhla 100% nakanjani, okuyinto yaziswa abasebenzisi bayo ngesikolo 10, usebenzisa ubuchwepheshe obuhle kakhulu ukuvikela imininingwane yomuntu siqu yeklayenti ngalinye, ngomholo olinganiselwe wabadlali bakho.
Yonke imidlalo ethuthukiswe yinkampani yaseSweden iMicrogaming enikezelwe ukuthuthukiswa kwemishini ye-slot. Kakhulu ezinikezelwe ekwakheni umdlalo oukhoma ngokuphelele.
Izindlela zokukhokha ezenelisayo
ungafaka imali kwi-akhawunti yakho ngenhlanhla yeVisa, I-Electron, Ukudluliselwa kwebhange le-MasterCard noma ngisho nenkosi, ngakolunye uhlangothi ungasebenzisa i-PayPal kanye nefolda lebhokisi lemali. Amaphephadonga ayahluka ngokuya ngendlela yokukhokha esetshenzisiwe.
Izici Ezingacatshangelwa Lapho ukhetha Inhlanhla
Ngaphambi kokukhetha amakhasino aku-intanethi njengenhlanhla ukubeka ukubheja kwakho, kufanele wazi izici nekhodi okufanele uhlangane nazo futhi ubheke eyodwa ehlangabezana nezidingo zezidingo zakho.
Ngalesi sizathu, Uma ufuna imininingwane eminingi mayelana nekhasino nemibono yenhlanhla, Nazi ezinye zezinto ezizokusiza ukhethe izici::
Isimo sakho sezomthetho
ISuertia inelayisense ekhishwe yiDirectorate General yalo mdlalo, Le layisensi ikuvumela ukuba wenze noma yimuphi umsebenzi wezomthetho wokuthi ukugembula kumakhasino aku-inthanethi..
Amabhonasi futhi unikeza uSuertia
ISuertia inikela ngabadlali ibhonasi eyamukelekile evela 50%, ngaphezu kwalokho kugxile kubasebenzisi futhi bajabulele isinxephezelo sabadlali bebhonasi 7% ngiye.
inhlanhla Le bhonasi ingafinyelela ngisho nesibalo 300 €, ngakho-ke bayakulahlekelwa kuzophazamiseka kancane, ngakolunye uhlangothi ukukhushulwa kwamakhasino aku-intanethi kuhloselwe ukubheja kwezemidlalo kuphela, ezingathokozelwa kuzo zombili ikhodi yeselula kanye nesiphequluli.
USus Suertia unikeza abasebenzisi ibhonasi eyamukelekile ye 300 € ngaphezulu kuka 50%, ongakujabulela ngemuva kwediphozi yokuqala. Ukuze ujabulele le khodi yebhonasi futhi kufanele ubhalise kwiwebhusayithi.
Izimo zokujabulela le khomishini ngenhlanhla kuzodingeka zishiya 44% wemholo lokudlala i-roulette, bathola kuphela 56% ngamunye.
Ngakolunye uhlangothi, yize uhlanganyele kuphela ku-Blackjack uzothola 34% yemiphumela, kodwa uma udlala slot uthola kuphela 10% yemiphumela.
ISuertia yikhasino e-inthanethi ehlonishwayo, ngokuya ngesilinganiso sakho, isipiliyoni sibekwa ezingeni eliphakeme ngokuqhathaniswa namanye amakhasino eSpain. Ivumela abasebenzisi ukuthi badlale futhi babheje ngekhodi yezokuphepha futhi bajabulele konke ukukhushulwa nokunikezwa nemibono.
Abaningi babo bakholelwa ukuthi ukushoda kweklabhu ye-VIP okuvuza ukuthembeka kwamanye amakhasimende futhi kufanele kuvuselele inkundla ye
Ngohlelo lokusebenza leselula ungathokozela nezinsizakalo ezinikezwa yisikhulumi sewebhu, kufaka phakathi imidlalo efana nemishini ye-slot, roulette kanye videobing. Uhlelo lokusebenza luhambisana namadivayisi we-Android ne-iOS, futhi abasebenzisi bangajabulela ukukhushulwa, okunikezwayo kanye namabhonasi kanye nekhodi enethwayo yenhlanhla.
Le yekhasino eku-inthanethi ivikelwe umthetho we-Organic 15/1999, okuqinisekisa ukuvikelwa kwemininingwane yomuntu uqobo, kwezinye izimo, iqinisekisa ukuphepha kwabasebenzisi bayo ngensizakalo yokuzikhipha kanye nokubethela idatha..
Futhi, le amakhasino aku-inthanethi anokuvivinya kokuziphatha okuhle futhi amakhasi asiza wezinkinga. Ngoba iqondiswe kuphela kwingosi yolwazi yewebhusayithi yanamuhla, icela abasebenzisi ukuthi bahlole iminyaka yabo.
Abasebenzisi beSuertia bangaxhumana nabasebenzi bokugcina kumakhasimende ngezindlela ezahlukahlukene, kungaba nge-imeyili, Ukushayela noma ngengxoxo ebukhoma abangabasebenzisi bangaphendula ngisho imibuzo yakho ngokuphendula imibuzo efaneleyo yeSeshini lemibuzo ngokushesha.
Umqondo wale sayithi uqalwe ngu-Eduardo Losilla quinielista, okwathi ngemuva kokusebenza iminyaka eminingi kulo mkhakha wanquma ukusungula umhlaba wokubheja kwezemidlalo, suertia exhumana ephethwe yinkampani iSuertia SA.
Le nkampani ingenye yokuqala ukuthola ilayisense ekhishwe yi-DGOJ, isiteji esinokuningi okungaphezulu 70 imidlalo
Gcina igama lami, imeyili newebhu kulesi siphequluli ngokuzayo lapho ngiphawula.
1xBet Bukhoma Kuqhubeke 2012 1xbet ngubhuki waqala ukwamukela kubhejwa inthanethi. Manje 1xbet has ukuthi kuyinto bukhoma de 500000 abasebenzisi abangaphezu kwe- 40 amazwe, Transmission 1xbet isebenza 365 / ngonyaka futhi 24/7. Funda ngaphezulu…
1I-XBIT Spain 1XBIT ingenye yokubheja kakhulu emazweni e-CIS, lapho ngaba nokuhlangenwe nakho okuhle. Ngaphezu kokuba yiplatifomu yemali, kuyikhaya elihle ukwenza Funda ngaphezulu…
ISINGENISO Enye yamakhasino adume kakhulu eYurophu i-Unibet. Lawa ma-opharetha asebenza ngokubheja kwezemidlalo nemidlalo yasekhasino azikabi nawo amalayisense adingekayo yi-General Directorate yomdlalo., Funda ngaphezulu…